जिल्लापाल कार्यालयमा पनि विरुवा - खबरम्यागजिन
Homeखबरजिल्लापाल कार्यालयमा पनि विरुवा
विश्व पर्यावरण दिवस5जुनका दिन पर्यावरणको संरक्षको निम्ति विश्वभरि पालन गरिन्छ। पर्यावरण सम्बनधी वैश्विक स्तरमा राजनैतिक एवं सामाजिक जागृति ल्याउने उद्देश्यले वर्षैपछि पालन गर्ने विश्व पर्यावरण दिवस यता कालेबुङमा पनि पालन गरियो। कालेबुङका विभिन्न सामाजिक संस्था, जिल्लापाल कार्यालय नगरपालिका, स्कूल आदिले यस अवसमरा रूखका विरूवा रोपण, सचेतना कार्यक्रम इत्यादि विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गरेको थियो।
कालेबुङका चारवटा संस्थाहरूले संयुक्त रूपम जिल्लापाल कार्यालयमा विभिन्न प्रजातिका विरूवाहरू रोपे। कालेबुङका जिल्लापाल डा. विश्वनाथको अगुवाईमा कालेबुङ ब्याडमेन्टन एसोसिएसन, मा एनजीओ, ह्युमेन राइट इण्डिया कालेबुङ अनि हू केयर्सका सदस्यहरूले विरूवा रोपणमा सहभागिता जनाएका थिए। विशेष गरी जिल्लापाल कार्यालयमा विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू रहेको कारण यहाँको सुन्दरतालाई केन्द्र गर्दै विरूवा रोपन गरिएको ह्युइमेन राइट इण्डियाका आनन्द लखोटियाले बताएका छन्।
यसरी नै अर्कोतिर सन्त फिलोमिना स्कूलले पनि पर्यावरण दिवसको अवसरमा सचेतना कार्यक्रम एवं विरूवा रोपण कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। स्कूलले गरेको कार्यक्रमबारे प्राचार्य सिस्टर क्रिसन्ताले जानकारी दिएकी छन्।
अर्कोतिर कालेबुङ नगरपालिकाले पनि यहाँखो टाउनहलमा विद्यार्थीहरूलाई लिएर सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। विभिन्न स्रोत व्यक्तिहूरलाई झिकाएर गरिएको कार्यक्रमको मूल उद्दोश्य विद्यार्थीहरूलाई शिक्षत गराउनु रहेको भन्दै नगरपालिका स्वास्थ्य अधिकारी डा. जिम्बाले कालेबुङ अहिले मैलाले समस्यासित जुझिरहेको अनि यसबारे भइरहेका पहलहरूबारे जानकारी दिएका छन्।